बुधवार, भदौ १३, २०७५
जलवायु परिवर्तनको विषय ओझेलमा परेको छ
जलवायु परिवर्तनको मुद्दा विश्वव्यापी बनेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण कालान्तरको सम्भावित आर्थिक, मानवीय तथा सामाजिक जोखिमको विषय पनि उत्तिकै चर्चित बनेको छ ।
उत्पादन वृद्धि र गुणस्तर सुधारमा केन्द्रित छौं
सरकारको प्राथमिकतामा कम परे पनि सधैं चर्चामा आइरहने विषय हो– कृषि । नेतालाई भोट माग्दा बढी चासो हुन्छ, किसानलाई बाह्रै मास कृषि उत्पादनकै चिन्ता हुन्छ । त्यसमाथि ६६ प्रतिशत जनता कृषक भएको मुलुकमा यो क्षेत्रको चर्चा नहुने कुरै भएन ।
एनएफआरएस बैंकरले पनि नबुझेकाले दुबिधा बढेको हो
वित्तीय बजारमा आफ्नो बेग्लै पहिचान बनाउन सफल भएका प्राइम कमर्सियल बैंक र ओम डेभलमेन्ट बैंक केही महिनापछि एउटै संस्था भएर कारोबार गर्दै छन् । दुवै संस्थाले प्रतिस्पर्धी वित्तीय बजारमा आफूलाई स्थापित गराइसकेको अवस्थामा किन एक हुँदै छन् भन्ने जिज्ञासा धेरैलाई छ । दुवै संस्थाको पुँजी पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेअनुसार पुगेको छ ।
बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड ?
कञ्चनपुरमा बालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाका बारेमा सरकार गम्भीर छ । १३ वर्षीया निर्मला पन्तका हत्यारालाई कारबाही गर्न र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकार कुनै कन्जुस्याइँ गर्दैन ।
संघीय सरकारले स्रोतसाधनमा विभेद गर्यो
बारा जिल्लाको तत्कालीन लिपनीमाल, हालको परवानीपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मा २०२६ साल मंसिर १५ गते जन्मिएका जितेन्द्र सोनल हाल प्रदेश नम्बर २ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् । सोनल पञ्चायतकालदेखि नै प्रजातन्त्रका लागि संघर्षरत थिए ।
‘फेक रेस्क्यु’ सम्बन्धी प्रतिवेदन छानबिन नै नगरी लहडमा ल्याइएको हो
पछिल्लो समय पर्यटकलाई ‘फेक रेस्क्यु’ गरेर ठगी गरेको भन्दै सरकारले छानबिन प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न कम्पनीलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको छ । त्यसमा हेलिकप्टर कम्पनीहरूसमेत छन् । के ‘फेक रेस्क्यु’ मा हेलिकप्टर कम्पनी पनि संलग्न हुन् त ? अथवा कसरी ‘फेक रेस्क्यु’ गरेर बिमा दाबी गरियो ? भन्ने विषयमा वायुसेवा सञ्चालक संघका अध्यक्ष पवित्रकुमार कार्कीले सरकारले अनुसन्धान नै नगरी प्रतिवेदन ल्याएको आरोप लगाए ।
हरेक ठाउँमा संविधानले नै अवरोध खडा गरेको छ
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव नेपाली राजनीतिमा छुट्टै पहिचान बनाएका लोकप्रिय नेता हुन् । २०१६ सालमा सप्तरीको भागतपुरमा जन्मिएका यादवले महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन गरेका छन् ।
मनपरी करका दरले संघीयता नै धरापमा पर्ने खतरा
मुलुकले यतिबेला संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो अभ्यास गर्दैछ । २०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको संविधानले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय सरकारहरूले आ–आफ्ना बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।
बिमाको महत्व बुझाउन सकेका छैनौं
नेपालमा बिमा व्यवसाय सुरु भएको लामो समय भए पनि यसको पहुँच ११ प्रतिशत मात्र रहेको बिमा समितिको तथ्यांक छ । बिमाबारे पर्याप्त जनचेतनाको अभाव र बिमामा आकर्षित गर्ने सरकारी नीति नहुँदा बिमाबारे आम सर्वसाधारणमा कम चासो भएको बताउँछन्, प्राईम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोजकुमार भट्टराई ।
सञ्चार क्षेत्रलाई संकुचित पार्ने संहिता
१ सय ६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गर्दै भदौ १ बाट मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन र मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन लागू भएको छ । त्यस्तै अरु पनि केही नयाँ ऐन आएका छन् । नयाँ कानुनसँगै जंगबहादुर राणाले १९१० सालमा लागू गरेको र पटक पटक संशोधन हुँदै अहिलेसम्म चल्दै आएको मुलुकी ऐनमा धेरै सुधार गरिएको छ ।
करभन्दा सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ
नेपालको संविधानअनुसार धमाधम कानुनहरू बनिरहेका छन् । संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न पुराना कानुन खारेज वा संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । यही सन्दर्भमा कतिपय कानुन बनिसकेका छन् भने बन्न बाँकी कानुन पनि तोकिएको समयभित्रै बन्ने नै छन् । यसैगरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकारहरूले आम्दानीका लागि विभिन्न कर लगाइरहेका छन् ।
मुलुकमा एकल कर प्रणली नै हुनुपर्छ
निजी क्षेत्रभित्र अध्ययनशील र प्रस्ट वक्ताका रूपमा चिनिएका कमलेश अग्रवाल नेपाल चेम्बर अफ कमर्स संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएसँगै वाणिज्यतर्फका उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका हुन् । चेम्बर महासचिवका रूपमा रहँदै वैचारिक व्यक्तित्वका रूपमा ख्याति कमाएका अग्रवाल विशेषतः बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी लगानीकर्ताबीच ‘सेतु’का रूपमा पनि परिचित छन् ।
दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको वातावरणीय प्रदूषणका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ, अनि विकासको नाममा वातावरणीय विनाश पनि भएको छ । तर, हामी यो सोचिरहेका छैनौं कि आजको विकासलाई मात्रै ध्यान दिँदा भोलि हाम्रा सन्ततिलाई प्रदूषणसहितको वातावरण हस्तान्तारण गरेर जाँदै त छैनौं । बढ्दो सवारी साधनको चापसँगै वायु प्रदूषण पनि बढिरहेको छ ।
२०४३ साल साउन १ गतेदेखि शाखा अधिकृतका रूपमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका योगेन्द्र गौचनले एमबीएमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका छन् । सरकारी सेवामा तीन दशकको अनुभव लिएका गौचनले सडक, स्वास्थ्य, स्थानीय विकास, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न निकायमा रहेर काम गरेका छन् ।
साख मूल्यांकन व्यवसायको ‘गेम चेन्जर’ ऋणीकाे रेटिङ हो
भारतीय रेटिङ एजेन्सीको सहायक कम्पनीको नेपाल स्थापना भएपछि नेपाली कम्पनीको व्यवस्थापन प्रमुखको जिम्मेबारी सम्हालेका साजन गोयलले केयर इन्डियामा करिब ११ वर्ष बिताइसकेका छन् । पछिल्लो करिब एक वर्ष नेपालमा केयर रेटिङलाई स्थापना गर्न लागिपरेका गोयलसँग सन् २००५ मा भारतीय सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएको आन्द्रा बैंकमा क्रेडिट एनालिस्टका रूपमा करिब डेढ वर्ष काम गरेको अनुभवसमेत छ ।